RW Rooble “Shacabka Muqdisho ma istaahilaan, culeyskii ay kala kulmeen muddadii ay xirnaayeen waddooyinka” +VIDEO | HalQaran.com
Home Wararka Maanta RW Rooble “Shacabka Muqdisho ma istaahilaan, culeyskii ay kala kulmeen muddadii ay...
RW Rooble “Shacabka Muqdisho ma istaahilaan, culeyskii ay kala kulmeen muddadii ay xirnaayeen waddooyinka” +VIDEO
Muqdisho (Halqaran.com) – Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda JFS mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa Talaadadii maanta ah sheegay in jidadka Caasimadda Muqdisho loo furay si loo fududeeyo nolosha, ganacsiga iyo isu socodka dadweynaha.
Mr. Rooble ayaa ka raali-galiyey shacabka magaalada Muqdisho dhibaatooyinkii ay kala kulmeen xirnaanshaha waddooyinka.
“Bil ka hor waxaan ka mid ahaa shacabka Muqdisho ee dhibaatada ku qabay xirnaashaha waddooyinka. Shacabkuna ma istaahilaan, mana qaadan karaan culeyskii ay kulmeen muddadii waddooyinku xirnaayeen” ayuu yir RW Rooble.
Wuxuu intaasi raacyay Rooble, in qiimeyn lagu sameyn doono jidadka kale ee xiran, kuwaas oo iyagana la furi doonno wakhtiga ugu horreeya ee la hubiyo in khatar uga imaaneyn shacabka.
Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa ku ammaanay ciidamada ammaanka sida ay ugu dhabar adeyggeen difaaca shacabka Soomaaliyeed, waxa uuna ku adkeeyey in ay kor u qaadaan wadashaqeynta dhanka amniga ee ay la leeyihiin bulshada.